Myanmar Web Creator - ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ဖန်တီးခြင်း ဝန်ဆောင်မှု Web Design, Website Development, Graphic Design, SEO, Digital Marketing in Myanmar- Myanmar Web Creator
Logo နှင့် Graphic design ဝန်ဆောင်မှု
Web Design & Development ဝန်ဆောင်မှု
App ဖန်တီးခြင်း ဝန်ဆောင်မှု
ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ဖန်တီးခြင်း ဝန်ဆောင်မှု
Website ဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင် ကြီး/ငယ် များစွာ ယုံကြည်အားကိုးရာနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အွန်လိုင်းဆိုင်ခွဲတစ်ခုပါ
Myanmar Web Creator သည် လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းအတွက် စနစ်ကျ လှပသော ဝက်ဆိုက်ဒီဇိုင်းများကို အသက်သာဆုံး နှုန်းထားများဖြင့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမီ အရည်အသွေးများရရှိအောင် အချိန်တိုအတွင်း ရေးဆွဲပေးနေပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ တတ်နိုင်သည့် Budget ပေါ်မူတည်၍ အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်နိုင်သည့် Package များရှိသည့်အပြင် ကိုယ်တိုင် ရေးသားပြင်ဆင်နိုင်သော CMS စနစ်၊ Online Payment Gateway များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သော Ecommerce Website များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
သက်သာသော စျေးနှုန်းနှင့် သင့်တင့်သော နှစ်စဉ်ကြေးရှိခြင်း
Website ဝန်ဆောင်မှုအပြင် အခြားဝန်ဆောင်မှုများစွာကို တစ်နေရာထဲမှာ အပ်နှံနိုင်ခြင်း
Website Quality စစ်ဆေးပေးခြင်းနှင့် Website နှင့်ပတ်သက်သမျှ အရာအားလုံးကို အာမခံပေးနိုင်ခြင်း
အတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင်သူများမှ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများသုံးကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
MWC ၏ မည်သည့် ဝက်ဆိုက်တွင်မဆို အောက်ပါ အချက်အလက်များ အားလုံး ပါဝင်ပါသည်။
အကန့်အသတ်မရှိ ဝဘ်မေးလ် အရေအတွက်
နေ့စဉ် Backup ထားရှိခြင်း
Device အားလုံး ( Responsive)
Website QC ထားရှိခြင်း
လုပ်ငန်းကြီးငယ်မရွေး ကိုယ်တိုင်စာမျက်နှာထည့်သွင်းခြင်း ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည့် Package
စာမျက်နှာ (၁) မျက်နှာ မှစတင်၍ (၁၀) မျက်နှာ အထိပါဝင်ပြီး အချက်အလက်အစုံအလင်နှင့် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း Website တစ်ခုရရှိပါမည်။
Webmail အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ
ပြသပေးမည့် ဒီဇိုင်းအရေအတွက် ၂ခု
လုပ်ငန်းငယ်များနှင့် အခုမှစတင်မည့်လုပ်ငန်းများအားလုံးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးနှင့် စျေးအသက်သာဆုံး Package
စာမျက်နှာ (၁) မျက်နှာ မှစတင်၍ (၁၅) မျက်နှာအထိ ပါဝင်ပြီး လိုအပ်သလို Page များကို ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည့် လုပ်ငန်း Website ကို ရှိပါမည်။
ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းနိုင်မည့် Page အကန့်အသတ်မရှိ
ပြသပေးမည့် ဒီဇိုင်းအရေအတွက် ၃ခု
လုပ်ငန်းကြီးငယ်မရွေး ကိုယ်တိုင်Update ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အလိုအပ်ဆုံး CMS များနှင့် ဘာသာစကား ပြောင်းလဲနိုင်သည့် Package
စာမျက်နှာ (၁) မျက်နှာ မှစတင်၍ (၄၅) မျက်နှာအထိ ပါဝင်ပြီး လိုအပ်သလို ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းပြင်ဆင်နိုင်ရန် CMS သို့ Login ဝင်ရောက် နိုင်ရန်အတွက် Admin Panel / Dashboard ပါဝင်သည့်အပြင် ဘာသာစကား ပြောင်းလဲနိုင်သည့် လုပ်ငန်း Website ကို ရရှိပါမည်။
လုပ်ငန်းကြီးငယ်မရွေး ကိုယ်တိုင်Update ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အလိုအပ်ဆုံး CMS များနှင့် MWC မှ ထည့်သွင်းပေးမည့် Page အရေအတွက်များစွာ ပါဝင်သည့် Package
စာမျက်နှာ (၁) မျက်နှာ မှစတင်၍ (၇၀) မျက်နှာ အထိပါဝင်ပြီး အချက်အလက်အစုံအလင်နှင့် လိုအပ်သလို ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းပြင်ဆင်နိုင်ရန် CMS သို့ Login ဝင်ရောက် နိုင်ရန်အတွက် Admin Panel / Dashboard ပါဝင်သည့်အပြင် ဘာသာစကား ပြောင်းလဲနိုင်သည့် လုပ်ငန်း Website ကို ရရှိပါမည်။
လုပ်ငန်းကြီးငယ်မရွေး ကိုယ်တိုင်Update ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အလိုအပ်ဆုံး CMS များနှင့် ဘာသာစကားများစွာ ပြောင်းလဲနိုင်သည့် Package
စာမျက်နှာ (၁) မျက်နှာ မှစတင်၍ (၁၂၅) မျက်နှာ အထိပါဝင်ပြီး အချက်အလက်အစုံအလင်နှင့် လိုအပ်သလို ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းပြင်ဆင်နိုင်ရန် CMS သို့ Login ဝင်ရောက် နိုင်ရန်အတွက် Admin Panel / Dashboard ပါဝင်သည့်အပြင် ဘာသာစကား ပြောင်းလဲနိုင်သည့် လုပ်ငန်း Website ကို ရရှိပါမည်။
E-Commerce Website ဆိုတာ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကိုယ်ပိုင် Showroom သဖွယ် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ခင်းကျင်းပြသနိုင်ပြီး Customer များမှလည်း လိုအပ်သည်သမျှ အရာတိုင်းကို Credit/Debit Card, MPU Card များဖြင့် တိုက်ရိုက်ငွေချေကာ အိမ်အရောက် လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာဖြင့် သက်သက်သာသာ စျေးဝယ်နိုင်သည့် Website ပါ။
Categories များအလိုက် ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအား စနစ်တကျ စီမံထားနိုင်ခြင်း
Credit/Debit Card, MPU Card များဖြင့် တိုက်ရိုက် Payment လက်ခံနိုင်ခြင်း
စျေးနှုန်းတွက်ချက်ခြင်းနှင့် စျေးဝယ်လှည်း ပါရှိခြင်း
Talk to one of our consultants today and let’s create something beautiful.
MWC isaweb and mobile application development company offering services in website design, development, hosting, marketing, maintenance, and analysis.
No.624, Gantgaw Yeik Thar Street,16/4 Quarter, Thingangyun Township,Yangon, Myanmar
© 2019 - 2022 Myanmar Web Creator
Select Service Branding & Graphic Design Web Development Digital Marketing Application Development